होसियार, तपाई बिहान उठ्ने बित्तिकै यी चार कुरा खाने गर्नु भएको त छैन ? - Kathmandu Patra
Home Features होसियार, तपाई बिहान उठ्ने बित्तिकै यी चार कुरा खाने गर्नु भएको त...
होसियार, तपाई बिहान उठ्ने बित्तिकै यी चार कुरा खाने गर्नु भएको त छैन ?
बिहान उठ्ने बित्तिकै जे खानेकुरा देख्छौं त्यो खानु भनेको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ। यसले मानिसको पाचन प्रणालीमा नराम्रो असर पार्ने सम्भावना धेरै हुन्छ।
खाली पेटमा खाँदा नराम्रो असर पर्ने खानाहरु के-के हुन्?
बिहान उठ्ने बित्तिकै मन तातो पानी पिउँदा दिनभरी पेटलाई आराम मिल्दछ । मन तातो नभए राती छोपेर राखेको पानी बिहान पिउन सकिन्छ। त्यसपछि अन्य खानेकुराहरु खाँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ। नेपाल समय डटकमबाट
खाली पेटमा के खाने
Previous articleतपाई डरलाग्दा सपना देख्नुहुन्छ ? यस्तो छ कारण
Next articleतपाई बिहान खाली पेटमा पानी पिउनुहुन्छ ? त्यसो भए यस्ता हुनेछन् ९ फाइदा